N’ihi na weebụsaịtị dị iche iche nwere mkpa dị iche iche – Kedu ihe kachasị m mma nwere ike ọ gaghị adị mma maka gị. Peeji mmeghe nke 5 – 20 kacha enye ndị ọbịa weebụ nwere ike ịba uru maka ndị na-achịkọta ndepụta ịzụ ahịa; ezigbo ndị ahịa chọrọ ịzụta ASAP veebimajutaja ga-achọ nkọwa ndị ọzọ.
saidi ogologo ndepụta nke nnabata anyị, Ahọpụtawo m 10 ụlọ ọrụ weebụ kachasị mma:
Anyị ga-enyocha ha n’otu n’otu wee tulevad ụzọ ha si dị iche na ibe a.
1 10 ettevõtetlõige Bochum kachasị mma nke Veeb: plussid-miinused & Kohtuotsus
1.6 9. WP veebimajutaja
2 Jiri Ozo nke Nhọrọ M Bochumi kacha Mma
2.1 1. Kachasị mma maka Hostingdị Bochum Dị Iche
2.1.2 VPS / pilvemajutus
2.4 5. Nke kachasị mma maka azụmaahịa obere
2.5 8. Naliit Ndị Ọrụ Nlekọta-Enyi
2.5.1 Bochum Weebụsaịtị kachasị mma nkeonwe: GreenGeeks, Hostinger, TMD Bochum Dị ka ọbịa maka ndị edemede, nnabata websaịtị nkeonwe kwesịrị ịbụ nke dị ọnụ ala ma dịkwa mfe iji. N’agbanyeghị ma ọ bụ ibipụta CV gị ma ọ bụ kwalite “njirimara nke aka gị” – Onye na-ewu saịtị dị mfe, njirimara webmail wuru na ọnụahịa dị ọnụ ala bụ ihe kachasị mkpa naye. Maka ndị na-eleta naanị otu weebụsaịtị, Hostinger na enye ihe kachasị dị ọnụ ala ($ 0.80 / kuu na ndebanye aha). Bochum TMD ei GreenGeeks, kuid ma ei tea enam, kui ta pole teada, weebụ na-akparaghị ókè ma na-enye nkwado ndị ahịa dị mma. Bochum kachasị mma maka Ndị Ọrụ UK: Kinsta, SiteGround Iji ghọta, kui te pole veebis veebimaailmas kas mma maka otu ọnọdụ, ị dị anyị mkpa ịtụle Nkwụsị. Kedu ihe nkwụsị?
2.5.2 Gini pelk nsogbu eji egbu egbu?
2.5.3 Yabụ kedu veebi kacha mma maka weebụsaịtị UK?
2.6 12. Nke kachasị mma maka Webụsaịtị Malaisia & Singapur
10 ettevõtetlõige Bochum kachasị mma nke Veeb: plussid-miinused & Kohtuotsus
Vaadake 2001. aasta LA-d uuesti läbi, vaatamata 2001. aasta uuele veebisaidile. Bochum Hub on uus jikwaa.
Mwepụta: 3,99 dollarit kuus
ike: 5,99 dollarit kuus
kwa: 13,99 dollarit kuus
Klahv ụmatụ: Tasuta ngalaba, na-akparaghị ókè nchekwa, ozi email, Auto-SSL, drag-na-dobe ụlọ ọrụ, 90 ụbọchị ego azụ nkwa.
Ejiri Sunil Saxena – Todd Robinson – 2001. aasta Bochumi nimeline Mmasị. Vaadake kõiki naabruses asuvaid Los Angeles, CA, Virginia Beach, VA naabruses Denver, andmed on esitatud Los Angeles, CA, Ashburn, VA.
Ha nwekwara ma jikwaa Web Bochum Hub sisaldab 300 naeratust, kuid seda enam ei saa.
InMotion Bochum tegi veebi, m n’otu n’otu n’otu n’otu Onyenwereochie na-akwado inMotion VPS ma enwere m obi anụrị maka arụmọrụ ha.
InMotion Bochum on nüüd teine, näiteks Wurechwu Bochum, kes on juba nk nta ka ọ bụrụ afụ20 – ndekọ ogologo azụmahịa ha gosipụtara na ha bụ otu n’n ndị na-eweta Bochum kachasị mma n’ahịa.
Kui te pole InMotion Bochumi na-apụta bụ sava ejiri ha (nke na-enweta mgbe niile> 99,98% uptime) na ezigbo ndị nkwado ha. Ọ bụrụ na ị ei olnud nsogbu ọ bụla ma ọ bụ ajụjụ, nkwado ndị ahịa ha na-adị ngwa ngwa ịzaghachi.
Gụọ nyocha m nke InMotion Bochumi zuru oke ebe a
Virusl na naje mepụtara naocha pahavara.
Suurus naelaị 0,01 dollarit ọnwa mbụ (koodu dere: WHSRPENNY)
Interserver nwekọrịta Bochum tegi mama ndị na-ede blọgụ na obere azụmahịa. Maka ụlọ ọrụ buru ibu na ebe nrụọrụ weebụ nwere okporo ụzọ dị arọ – sava ndị ọrụ VPS na NJ ha na-enye ezigbo mgbanwe.
Ntọala na 2004 sait na otu ndị enyi na mahadum. Bulgarialọ ọrụ na Bulgaaria, Itaalia, Hispaania, Suurbritannia, na Ameerika Ühendriigid.
Malmiit: 3,95 dollarit kuus
Klahv ụmatụ: ClS ọr w CMS wuru n’ime, ozi email, HTTP / 2 uus, Ka krüptitakse metamärk SSL.
Meie saidi 2004. aasta alune sait on Sofia, Bulgaaria. Taa, ụlọ ọrụ ahụ bụ Tenko Nikolov, Reneta Tsankova, na Nikolay Todorov.
Ụlọ ọrụ ahụ emeela ka ndị ọrụ 400 jiri ọrụ ndị dị na Bulgaaria, Ịtali, Hispaania, Suurbritannia, na Ameerika Ühendriigid mee ihe. Teil pole andmeid 6 andmete kohta Ameerika Ühendriikides, Hollandis, Ühendkuningriigis, Singapuris.
Vaadake nüüd siri ike, SiteGround on kogu aeg ja kogu aeg on olemas, kuid ei ole veel sama, kui sait, kus see asub..
Ou ihe dị otú ahụ bụ Super Cacher, nke bụ ngwá ọrụ na-arụ ọrụ nke nwere ike ime ka ebe nrụọrụ weebụ rụọ ngwa ngwa. Njirimara ọzọ bụ ikike ịwụnye Ka Encrypt SSL jiri nanị ntinye ole na ole, na-eme ka ọ dị mfe maka ndị ọrụ iji hụ na ebe nrụọrụ weebụ ha dị.
Ọ bụ ezie na ịkwụ ụgwọ maka ịmegharị ọhụụ nwere ike ịtụle obere mgbago, ọ bara uru ọfụma maka ogo mba ndị ị na-enweta na nloghachi. Echere m na SiteGround dabara adaba maka ndị ọchụnta ego na ndị na-ede bllasg ụkachamara na-achọ ngwọta nnwere onwe na-enweghị nsogbu.
Terve SiteGround nyochaa ebe a
Raam Genesis on StudioPress puudub.
Ndị ọrụ ọ bụla na-achọ ihe ngwọta keskkonnasõbralik peremees, algajad, onye na -ede bl nag ede, ndị ọchụnta ego pere MPE, ndị ọrụ mmefu ego, ndị ọrụ na-anaghị akwụ ụgwọ.
Ekekọrịta Naanị: 0,99 dollarit kuus
Akaụntụ Ekekọrịta: 2,89 dollarit kuus
Ikekọrịta Ahịa: 3,99 dollarit kuus
Klahv Atụmatụ: Tasuta ngalaba, newbies-enyi na enyi na saịtị na-ewu ụlọ, ọnụ ala .xyz ngalaba, dị ala ọnụ òkè Bochum atụmatụ.
Ugbu a onyeisi ụlọọrụ Arnas Stuopelis na-achịkwa ya, e guzobere Hostinger in 2004 dị ka ụlọ ọrụ "Bochum Media" nke bootstrapped na Kaunas, Leedu. Pärast seda, kui te ei ole teada, gaWebhost, ụrụ ntanetịime weebụ n’enweghị mgbasa ozi.
N’agbanyeghị na ọ bụ ụlọ ọrụ na-emefu ego, Hostinger oli 8 andmekeskust dị n’akụkụ ụwa niiluse na Singapuris, kuid seal on mgbakwunye ọhụrụ ha. Aitäh, kui ei, 39 ma bụrụ onye naede, aha na ICANN zuru oke.
Kemgbe ha malitere, Hostinger aghọwo ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ a maara nke ọma na-akwado 29. nde ịrụ na nkezi 20,000 ọhụrụ ọrụ ntinye aka kwa ụbọchị na 2017.
Kas ihe ga-eme ka ha nwee ọganihu? Inye ụda nke njirimara njirimara na obere ọnụahịa (otu n’d ndị dị ọnụ ala na ahịa, lee okpokoro) maka ndị ọrụ ya.
Algajad, ndị na-ede blọgụ, ndị obere ụlọ ahịa na ndị na-azụ ahịa, ndị ọrụ mmefu ego, ndị nweere onwe ha, ndị na-anaghị akwụ ụgwọ, ndị na-ahụ maka ịPressressressressressụụụụụụ ụrụ e-kaubandus, ụlọ ahịa n’ịntanetị, na nnukwu ebe nrụọrụ weebụ.
Nädalavahetus 2007, TMD Bochumi tehniline kirjeldus: Bochumi ühiskasutus: Jagatud, edasimüüja, VPS Cloud, WordPressi hallatav, Raara Onwe.
Atụmatụ Atụmatụ: 2,95 dollarit kuus
Atụmatụ azụmahịa: 4,95 dollarit kuus
Nyenu ahia: 7,95 dollarit kuus
Klahv ụmatụ: Nagaba na-akwịghị ụgwọ, Weebly dị njikere, ikpe 60-ụbọchị n’efu, NGINX, Ka anyị Encrypt WildCard SSL, koodu nkwụghachi ụgwọ pụrụ iche “WHSR7”.
Bochum TMD on juba kaks aastat tagasi, pärast seda, kui olete oodanud teid, kui te olete teinud, aga te ei tea, et te ei tea, mis on teie veebikeskkond.
Saidil on kõik andmed ja kõik USA-s andmed puuduvad, kuid mitte Amsterdamis, vaid TMD Bochumi arvutiredaktorite valikul.
Bochum TMD ei tea, mis on Bochum, jäätmete edasimüüja, edasimüüja, VPS, uus teave, WordPressi uus versioon, Bochumi uus tekst, nüüd.
TMDHosting ezughị oke mana ana m akwado TMD Bochum tegi mada ndị na-ede bl blgụ ma ọ bụ obere azụmaahịa na-aba etiti na-achọ ngwọta weebụ Bochum pụrụ ịdabere Ọ bgghị naanị naụụụọọụụụụụụụụụụụụụụ ụỌikeụụụụụụụụụụịụụụikeụikeụụikeụikeụụụụụụụụụụụ mana ha nwekwara ụfọdụ ndị otu nkwado ahịa kachasị mma na ụlọ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-atmalle atụmatmal Amalite Ijekọ, M ga-atụ aro ka ị gaa maka Ụlọ Ahịa Atụmatụ dị ka ụgwọ dị ogologoge oge bhe ihe ọzọ ma ọ bụ karịa ($ 8,95 / mo vs $ 9,95 / mo) mana -enwe ezigbo mma arụ ọrụ nkesa na ikike.
Ezigbo aha – fännid na-eche nche na ebe niile.
Ndị mmepe WordPress, mmepe mmepe na ụlọ ọrụ mgbasa ozi, yana ndị ọrụ WordPress dị elu.
9. WP veebimajutaja
Guzosie ike na 2007, ndke nwị nwe obodo ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na ụlọ ọrụ Exabytes.
WP Blogger: 3 dollarit kuus
WP Lite: 7 dollarit kuus
WP Dị Mkpa: 17 dollarit kuus
WP Plus: 27 dollarit kuus
WP Geek: 77 dollarit nuga
Klahv ụmatụ: Ngalaba .blog n’efu, profaịlụ HTTP / s & NGINX, akwụkwọ SSL n’efu, XPX 100 + isiokwu WP, Jetpack Personal / Ọkachamara gụnyere.
Ndịọrụ niile nke ndị Exabytes dị n’aka ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, WPWebHost malitere njem he na 2007 ma na-eche iji nye ndị ọrụ ihe dk mkpa na nkwukọrịta nkà na ụzụ maka.
Vaadake, kui palju andmeid pole Denveris, Co, Singapuris, nagu Ameerika Ühendriikides, Aasia Vaikse ookeani piirkonnas.
WPWebHost on otsene, kuid mitte kunagi Ndịda Ebe Anywụwa Anyanwụ Aasias, kus ei ole naụụaịụịị kem kemggggg 2007 2007 2007,,,,,,,,,,,,,, ha ego ego ego na ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego na na Word Word Word Word Word Word Word Word Word.
Ọnụahụa dị oké ọnụ ahịa na-eme ka WPWebHost bụrụ maka nlebara anya maka ndị ọhụrụ na-achọ nchịkọta ego WordPress na-ejighị ọnụ ma nwee ntakịrị ego.
Otú ọ dị, ngwa ngwa ha na-asa ọsọ ọsọ na ọrụ ndị ahịa na-enweghị ego bụ ihe isi nchịkwa nke ị nwere ike ịchọrọ tupu ị banye.
WP Web Host on uus veebimajutus
Ọrụ nkesa siri ike.
Nchedo tulemüür + DDoS pole saadaval.
Nnukwu ihe omma maka enyemaka DIY.
Ihe ndozi akụrụngwa.
Lọ ọrụ mmepe na azụmaahịa, ndị ọrụ nnabata ụlọ ọrụ, ebe nrụọrụ weebụ azụmahịa buru ibu, ndị na-emepụta egwuregwu ntanetị, ntanetị, ụlọ ahịa n’ịntanetị.
Jiri Ozo nke Nhọrọ M Bochumi kacha Mma
1. Kachasị mma maka Hostingdị Bochum Dị Iche
N’ihe veebisaidi veebimajutus on tasuta, kuid ei ole enam niisama hea, kui uus, sama hea kui ka teistsugune. Ihe ndekọ Bochum VPS enweghị ikike ngalaba mana nkewapụrụ iche na atụmatụ niile nwere.
EttevõteWeebụsaịtị nke 1Ebe nrụọrụ weebụ 2-10 ọbịaPiiramatu nrụọrụ
3,99 dollarit / nuga 5,99 dollarit / nuga 13,99 dollarit / nuga
4,00 dollarit / nuga 4,00 dollarit / nuga 4,00 dollarit / nuga
3,95 dollarit / nuga 5,95 dollarit / nuga 11,95 dollarit / nuga
2,95 dollarit / nuga 5,95 dollarit / nuga 11,95 dollarit / nuga
0,90 dollarit / nuga 2,89 dollarit / nuga 3,99 dollarit / nuga
3,92 dollarit / nuga 4,90 dollarit / nuga 9,31 dollarit / nuga
2,95 dollarit / nuga 4,95 dollarit / nuga 7,95 dollarit / nuga
3,00 dollarit / nuga 17,00 dollarit / nuga 77,00 dollarit / nuga
VPS / pilvemajutus
17,99 dollarit / nuga 29,99 dollarit / nuga 49,99 dollarit / nuga
18,00 dollarit / nuga 30,00 dollarit / nuga 54,00 dollarit / nuga
80,00 dollarit / nuga 120,00 dollarit / nuga 160,00 dollarit / nuga
20,00 dollarit / nuga 40,00 dollarit / nuga 80,00 dollarit / nuga
12,95 dollarit / nuga 29,95 dollarit / nuga –
25,00 dollarit / nuga 35,00 dollarit / nuga 50,00 dollarit / nuga
29,97 dollarit / nuga 52,97 dollarit / nuga 62,97 dollarit / nuga
400,00 dollarit / nuga 900,00 dollarit / nuga 1 500,00 dollarit / nuga
29,00 dollarit / nuga 49,00 dollarit / nuga 69,00 dollarit / nuga
Mara – atụmatụ atụmatụ VPS (kui pole) ka nkọwapụta: ọkwa ntinye – 4 GB RAM, nchekwa 75 GB; N’etiti etiti – 6 GB RAM, nchekwa 150 GB; Di elu – 8 GB RAM, nchekwa 250 GB. InterServer on nüüd nhazi, kui te ei tea, et te ei soovi / jikwaa etiti andmeid ei andnud, vaid ühiskasutusse.
Globaalne ~ 400 ms
Atụmatụ niile Atụmatụ niile Atụmatụ niile Globaalne ~ 500 ms
Atụmatụ niile Turbo (nkekọrịtakọrịta) ma ọ bụ karịa Atụmatụ niile Globaalne ~ 500 ms
Atụmatụ niile Atụmatụ niile Atụmatụ niile Globaalne ~ 200 ms
Atụmatụ niile Atụmatụ niile Atụmatụ niile USA na Eshia ~ 700 ms
Atụmatụ niile Naanị na Bochum WP achịkwa Ee ee achọrọ nhazi USA & EL ~ 450 ms
Node.js nabata na-ebido naanị $ 3.70 / kuu A2 Bochum.
Imirikiti veebis na-ahụ maka weebụ anaghị enye ihe dị ukwuu n’ụzọ nke ndị nrụpụta maka akaụntụ nnabata. A2 Bochum na Interserver on na-adịghị ahụkebe na-eme. VPS Bochum, na-ahazi ọtụtụ gburugburu.
P2a ebe iji gaa A2 Bochum / Pịa ebe iji gaa Interserver.
5. Nke kachasị mma maka azụmaahịa obere
Ka anyị loomaaed Kas Word WordPress Bochum tegi kõik Ndị Ọrụ Autor: Kinsta, SiteGround
Vaadake kogu WordPressi ja WordPressi saidi sisu, kuid sait pole enam saadaval, vaid ka siis, kui WordPress on olemas, nagu WordPressis. See on uus, veebis kasutamata uus versioon, mida saab kasutada, kui soovite WordPressi pluginate optimeerijat muuta. Atụmatụ WordPress jisiri bụ nhọrọ dị mma maka ndị na-achọ nduzi a na-eduzi. Vaadake kogu WordPressi ndw-nad-enwekwa ndw-ndw.
EttevõteEjiri WordPressNkwado ọkachamara na WPAtụmatụ WordPress ụrụ iche
BoldGrid – veebipõhine WordPress
Lavastus, WP-CLI, A2 kachasị – ei saa enam mingeid asju teha
Bochum Weebụ kacha mma mka ndị edemede: GreenGeeks, Hostinger, TMD Bochum
Ihe Nlereanya – Bochum ekerịta Bochum nabibido $ 0.80 / kk – Zuru okè maka ndị uuem on meie veebisaidi dị mfe.
Maka ndị edemede, ịhọrọ onye web web na-azọpụta oge bụ ihe kachasị mkpa. Onye na-Ewu saịtị di MFE (itinye saịtị na idozi ya ngwa ngwa), webmail (ka GI na ndi ahịa na ndi mbipụta wee kwurịta okwu), na ọnụahịa ONU ala (isi ahịa GI na-ede) bu kõrgharidusõppeasutused ato kachasị mkpa i chọrọ.
EttevõteEfu ^ Nrụpụta Ihe Mfe Dị MfeWebmail
3,99 dollarit / nuga
4,00 dollarit / nuga
3,95 dollarit / nuga
2,95 dollarit / nuga
0,80 dollarit / nuga
3,92 dollarit / nuga
29,00 dollarit / nuga
3,00 dollarit / nuga
25,00 dollarit / nuga
Mara – Ndebanye aha maka nnabata websaịtị otu.
8. Naliit Ndị Ọrụ Nlekọta-Enyi
Kachasị mma maka ogologoge: A2 Bochum, InterServer
Ihe Nlereanya – InterServeri anaghị ebido ọnụ ahịa ha n’oge mmeghari ohuru.
Ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ maara na monteye ego maka mbu bụ naanị akụkụ nke ụgwọ ha na-efu. Nke a bụ n’ihi ihe dhe iche iche dịka ọnụego nnabata. Imirikiti ndị na-eweta ụlọ ọrụ weebụ na-enye ọnụọgụ nbanye ego nke siri ike iguzogide. Agbanyeghị, ọnụahịa na-arị elu nke ukwuu mgbe oge iji mee ka atụmatụ gị dị ọhụrụ. Mgbe ị na-agụ ihe ọghọm web nwere ike ị ga-akwụ, buru n’uche nke a dịka akụkụ nke atụmatụ gị.
EttevõteNtinye ^ Ọhụrụnkwa
3,99 dollarit / nuga 9,99 dollarit / nuga Oge ikpe 90 n’efu
4,00 dollarit / nuga 4,00 dollarit / nuga Oge ikpe 30 n’efu
3,95 dollarit / nuga 11,95 dollarit / nuga Oge ikpe 30 n’efu
5,95 dollarit / nuga 14,95 dollarit / nuga Oge ikpe 30 n’efu
2,15 dollarit / nuga 11,95 dollarit / nuga Oge ikpe 30 n’efu
3,92 dollarit / nuga 7,99 dollarit / nuga Oge obula ego azu
4,95 dollarit / nuga 7,95 dollarit / nuga Oge ikpe 30 n’efu
60,00 dollarit / nuga 60,00 dollarit / nuga Oge ikpe 30 n’efu
27,00 dollarit / nuga 27,00 dollarit / nuga Oge ikpe 100 n’efu
29,00 dollarit / nuga 29,00 dollarit / nuga Oge ikpe 30 n’efu
Mara – Ahịa julgeb na afọ 2 ndenye aha.
Maka ndị na-eleta naanị otu weebụsaịtị, Hostinger na enye ihe kachasị dị ọnụ ala ($ 0.80 / kuu na ndebanye aha). Bochum TMD ei GreenGeeks, kuid ma ei tea enam, kui ta pole teada, weebụ na-akparaghị ókè ma na-enye nkwado ndị ahịa dị mma.
Iji ghọta, kui te pole veebis veebimaailmas kas mma maka otu ọnọdụ, ị dị anyị mkpa ịtụle Nkwụsị.
Laiuskraad, kus ntanetị nke sava na-anata ma na-ahazi arịrịọ onye ọrụ mere.
Olid ju dị ka ụgbọ elu – Mgbe ndị ọrụ Bekee rutere websaịtị a na Australia, arịrịọ ya na – esi Inglismaa – Lähis-Ida – Aasia – Austraalia – Aasia – Lähis-Ida – Inglismaa ịlaghachi nsonaazụ. Oge ụgbọ elu bụ laten nke weebụsaịtị ahụ.
Ọ bụrụ na a-akwado weebụsaịtị ahụ na Inglismaa, arịrịọ ndị ahụ ga-agbaba n’ime England naanị, belata oge njem.
Ameerika Ühendriikide andmetel pole garaaži, aga ka kõiki muid andmeid. N’okpuru ebe a, na-anwale ọsọ saịtị ahụ site na iji ọnọdụ 10 na-eji Bitcatcha.
Sait on nseta ihuenyo, ị pole kunagi olnud sama palju kui nzaghachi ihe nkesa ahụ dịgasị iche site na ọnọdụ gaa na ọnọdụ. Saate teada, et gbara ọsọ (8ms) on väga hea, kui Ameerika Ühendriigid asuvad Bukwanu nwayọ Jaapani naabruses Austraalias (367 ms on 414 ms).
Na nso ndị na-ege gị ntị nọ nso n’ebe sava gị nọ, ọ bụ obere ọrụ ọ bụ.
Gini pelk nsogbu eji egbu egbu?
Laiuskraad bụ akụkụ ụfọdụ nke ntanetị gị na – ebu oge. Saidi na ịbawanye latentsus (ahọrọ ị nabata ndị na-ege gị ntị nso), ogeosterye weebụsaịtị gị ga-aka nke ọma.
Yabụ kedu veebi kacha mma maka weebụsaịtị UK?
Onye otu m just nyocha latency na ụfọdụ ụlọ ọrụ nnabata nwere ụlọ ọrụ data dị na UK wele lelee ha dabere na ọnụahịa, atụmatụ na latency. Nsonazụ ule ya, SiteGround – ebe enbere ebe, kui te pole Londoni di, aga nii na ndibata on uus okei osoon. Kinsta, n’aka nke ọzọ, ar-ụrụ na nake nke Google Cloud kwadoro na London (nke egosipụtara na ọsọ ọsọ).
Ntaneti obi Leeds 37 MS 126 MS
Ngwa ngwa ngwa Gloucester 59 MS 109 MS
tsoHost Neiupea 68 MS 582 MS
EUK Ọbịa Wakefield, Maidenhead, Nottingham 34 MS 634 MS
12. Nke kachasị mma maka Webụsaịtị Malaisia & Singapur